Mulkiilaha kooxda Chelsea oo qaadanaya dhalashada Israa’iil – Somali Integration Tv
Aqoon iyo OgaalBSK Bergsjön
Roman Abrahomovich, oo ah mulkiilaha kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa la filayaa inuu qaato dhalashada dalkaasi Israa’iil.
Wararka waxa ay sheegayaan in ninkan oo haystay dhalashada dalka Ruushka uu u safray Israa’iil kadib markii uu dhacay fiisihii uu ku gali jiray dalka Ingiriiska, kaas oo loo malaynayo in aanan loo cusboonaysiinin sababo loo tiirinayo xiriirka dublamaasiyadeed ee Ruushka iyo Ingiriiska kadib markii sunta lagu weeraray Sergei Skripal oo ahaa sirdoon Ruush ah.
Mulkiilaha kooxda Chelsea ee Ingiriiska
Dadka wata baasaboorka Israa’iil ayaa fiiso la’aan ku gali kara Ingiriiska. Ninkan ayaa ka mid ah dadka ugu taajirsan adduunka, majaladda Forbes-na waxa ay hantidiisa ku qiyaastay $11.5bn.
Abrahomovich ayaanan ka qeybgalin ciyaartii bishan dhexmartay Chelsea iyo Manchester United, taas oo kooxdiisa ay guushu ku raacday. Waxaa la sheegay in uu hotel ka iibsaday magaalada Tel Aviv, balse uu u bedalay deegaan caadi ah sida ay qortay warbaahinta dalkaas. Xiriirka Ruushka iyo Ingiriiska ayaa aad u xun illaa markii uu dhacay weerarkii Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia. Sharciga Israa’iil ka jira ayaa waxa uu yahay in qofka Yuhuudiga ah uu qaadan karo dhalashada dalkaas meel kasta oo uu adduunka ku dhashay.
Weli ma maqashay Taleefoon beteri la’aan shaqeeya?